ငယ်သေးတော့ ဆီလီကွန်ထည့်မလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဗိုက်ကအသားနဲ့ ထည့်လုပ်ရတယ်ပြောနေတာ။ ညီမလေးက အစားထိုးတာ ဘာမှမလုပ်ဘူး၊ ဖြတ်ဆိုဖြတ်တာဘဲလုပ်မယ် ပြောထားတာတဲ့ဆရာ။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ပြောပြပေးပါလားဆရာ။
အရင်က ရင်သားကင်ဆာအတွက် ရင်သားတဖက်ဖြတ်ထုတ်ရတဲ့သမီးအတွက် သူ့ဖခင်ကမေးလို့ ရေးထားတာရှိပါတယ်။ ရင်သားမှာ ကင်ဆာဖြစ်လို့ တဖက်လုံး၊ နှစ်ဘက်လုံး ဖြတ်ထုတ်လိုက်ရသူတွေကို အမြင် အရင်လိုဖြစ်စေဘို့နဲ့ အထိအတွေ့ ကောင်းစေဘို့ရာ ရင်သားအသစ် ခွဲစိတ်ထည့်ပေးနိုင်တယ်။ Implants ရင်သားအတုထည့်တာကို Mastectomy ရင်သား ခွဲထုတ်ပြီး ချက်ချင်းလဲ လုပ်နိုင်တယ်။ တချို့ကို နောက်မှ အေးအေးဆေးဆေး လုပ်နိုင်တယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်နိုင်ရင် ချက်ချင်းလုပ်ကြတယ်။ လူတိုင်းက လုပ်ဘို့သင့်ကြတာတော့ မဟုတ်ပါ။
လုပ်မယ်ဆိုရင် Plastic surgeon (ပလပ်စ်တစ်) ခွဲစိတ်ဆရာဝန်၊ Breast surgeon ရင်သား-ခွဲစိတ်ဆရာဝန်၊ Oncologist ကင်ဆာအထူးကုဆရာဝန်၊ Radiation oncologist ဓါတ်ရောင်ခြည်-ဆရာဝန်တွေနဲ့ တိုင်ပင်ရမယ်။ လုပ်ပြီးရင် မွေးရာပါ လိုတော့ ကောင်းမှာမဟုတ်ပေမဲ့ အများကြီးစိတ်သက်သာရာရစေမှာ အမှန်ပါ။ အမြင်ကောင်းလာစေမယ်။ ကျေနပ်မှု တိုးတက်လာစေမယ်။ လူတောတိုးနိုင်လာမယ်။
Breast implants ရင်သားအတုထဲမှာ Saline ဆားရည်၊ ဒါမှမဟုတ် Silicone (စီလီကွန်) သုံးတယ်။ ဆားရည်နဲ့ဟာဖြစ်ဖြစ် Silicone (စီလီကွန်) ဖြစ်ဖြစ် Shell အကာကတော့ (စီလီကွန်) အမာစားဖြစ်တယ်။ လိုအပ်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ခန္ဓာ တခြား နေရာကနေ ယူထားတဲ့ အရေပြား၊ အဆီနဲ့ ကြွက်သားကိုယူပြီး တည်ဆောက်ရတယ်။ ဘယ်ဟာ အကောင်းဆုံးနည်း ဆိုတာကို ဆရာဝန်တိုင်းက လက်ခံထားတာတော့ မရှိပါ။ နည်းတိုင်းမှာ အကောင်းနဲ့ အဆိုး ဒွန်တွဲနေတာပါ။ ကိုယ့် ကိုယ်ခန္ဓာ တခြားနေရာက ယူစရာတွေလိုမယ်ဆိုရင် ဒါးရာ၊ ချုပ်ရိုး ပိုကြီးမယ်၊ အတုပစ္စည်း သန့်သန့်ဆိုရင် တမျိုး။ အတုနဲ့ ကိုယ့်အသားကို တွဲသုံးတာက ပိုပြီးကိုယ်ပိုင်ထင်မယ်ပေါ့။
တချို့ကို Tissue expansion နေရာချဲ့ပေးတာကိုမလုပ်ပဲ အတုကို တခါထဲထည့်တာမျိုး တန်းလုပ်ပေးနိုင်တယ်။ သူ့မှာ ရင်သားခွဲထုတ်ပြီးနောက်မှာ ပကတိအရေပြားနဲ့ ကြွက်သားအလုံအလောက် ကျန်နေသေးလို့ လုပ်နိုင်တာပါ။ လူတိုင်းကိုတော့ လုပ်မရပါ။
သတိထားစရာတွေ = ရင်သားနေရာနာနေတာ၊ သွေးယိုတာ၊ ပိုးဝင်နိုင်တယ်၊ အမာရွတ်ရှိနေမယ်၊ အနာမကျက်နိုင်တာ၊ အထိအတွေ့ခံစားမှု မတူတော့တာဖြစ်မယ်၊ ထည့်ထားတာက အရေပြားအပြင်ထွက်လာတာ၊ အမာရွတ်က အထဲကအတုကို ဖိနေတာ။ ထည့်ထားတာက ယိုစိမ့်၊ ပေါက်ပြဲသွားတာ၊ ချပ်ပြားသွားတာ၊ နောက်ထပ် ခွဲစိတ်ရနိုင်တယ်။
• Saline စုတ်ပြဲတာဖြစ်ရင် ပြန်ဖေါင်းစေအောင် လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ အိတ်ထဲကဆားရည်ကို ကိုယ်ခန္ဓာကနေ စုပ်ယူလိမ့်မယ်။ လိုအပ်ရင် ပြန်ထုတ်ပြီး အသစ်တခု ထပ်ထည့်နိုင်တယ်။
နို့သီးထိပ်ဖျား လုပ်ပေးတာကို Permanent implant ဒုတိယ ခွဲစိတ်မှုလုပ်ချိန်မှာ တခါထဲလုပ်ပေးတယ်။ တချို့က ၂ လ အနည်းဆုံးခြားပြီးမှ လုပ်တယ်။ သဘာဝနဲ့ တူနိုင်သမျှတူစေဘို့ပါ။ အတုတပ်လိုက်တဲ့ ရင်သားရဲ့ အရေပြားကနေ အနာ ကောင်းကောင်းကျက်ချိန်မှာ လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ ရင်သားအရောင်ရင့်အဝိုင်းကို ပေါင်ခြံကအရေပြားကိုယူပြီး အရောင် ရင့်လာအောင် ထိုးကွင်းထိုးတည်းနဲ့ လုပ်ရတယ်။ Nipple-sparing mastectomy ရင်သားကို ထုတ်ရတုံးမှာ ချန်ထားလို့ ဖြစ်နိုင်ရင် နို့သီးနေရာကို ချန်ခဲ့နိုင်တယ်။ လူတိုင်းကိုတော့ မရဘူး။ လိုအပ်ရင် အဲလိုလုပ်ထားတာကို နို့သီးထိပ်နေရာကို ကင်တာမဖြစ်အောင် ဓါတ်ကင်တာပါ လုပ်ပေးရမယ်။
Menactra vaccine ဦးနှောက်မြှေးရောင်ရောဂါကာကွယ်ဆေး...
Hepatitis B test kit အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီ စစ်ဆေးနည်...
Blood type change question သွေးအုပ်စုပြောင်းတတ်သလာ...
Delicious till the last drop နောက်ဆုံးတစက်အထိ အရသာ...
Fish bone in the throat လည်ချောင်းထဲ ငါးရိုးစူးရင်...